downloaded from www.dailykids.net
မိသားစုအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်၊ အနာဂါတ်ကိုမျှော်မြင်ပြီးငွေကိုစံနစ်တကျစုတတ်၊ သုံးတတ်သည့်၊သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်၊ စည်းစံနစ်ချပေးခဲ့သည့် အဖေသည်ကျွန်တော်ဧ။်စံပြ role model ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဖေက၀ိဇ္ဖာတွဲဖြင့်ဘွဲ့ရသော်လည်း သိပ္ပံပညာကိုဝါသနာပါသည်။ စက်ပစ္စည်းဝါသနာပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်စာအုပ်ဖတ်ပြီး၊ ကိုယ်တိုင်မီးအားမြှင့်စက်ဆင်သည်။ ခုလိုကွန်ပျူတာခေတ်ရောက်တော့လည်းကွန်ပျူတာဝါသနာပါပြန်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးလည်းဝါသနာပါသည်။ ရှယ်ယာနှင့်စပါးစိုက်ဖူးသည်။ မွေးမြူရေးလည်းလုပ်တတ်သည်။ နယ်ကိုတာဝန်ကျတော့ ၀က်ကလေးတွေ ကြက်ကလေးတွေမွေးဖူးသည်။ ကြက်ဥဖောက်စက်ကိုယ့်ဘာသာထွင်လုပ်သည်။ အဘိုးဆီက ဆောက်လုပ်ရေးပညာနှင့် မြန်မာရိုးရာတူရိယာတီးမှုတ်မှုအမွေရခဲ့သဖြင့် အိမ်ပုံစံ blue print ကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲသည်။ အနုပညာလည်းရသည်။ တပည့်တွေကိုစေတနာကြီးမားစွာစာသင်ပေးတတ်တဲ့ဆရာစိတ်လည်းရှိသည်။ ရုံးချိန်ပြီးသည်နှင့် အိမ်ကအင်္ဂလိပ်စာကျူရှင်၊ ညပိုင်း၈နာရီလောက်အထိ၊ အိမ်သင်၊ မအားရအောင် သမ္မာအာဇီဝအလုပ်၊ ကုသိုလ်လည်းရသည့်အလုပ်ဖြင့်မိသားစုကိုရှာကျွေးခဲ့သည်။ အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးပြီး၊ လာဘ်မစားသည့်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းကုန်သွယ်ရေးမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်နေရာတစ်ခုမှာ အကြီးအကဲဖြစ်ခဲ့သော်လည်း၊ အိမ်ဆောက်သည့်သံသွပ်ပစ္စည်းကအစ ဘိလပ်မြေအဆုံး၊ ရုံးနှင့်လွတ်လွတ်ကင်းကင်းအပြင်က၀ယ်ပြီး၊ ခြစ်ခြစ်ချုတ်ချုတ်စုငွေလေးဖြင့် နည်းနည်းစီနှင့်ကိုယ်တိုင်တတ်နိုင်သမျှလေးနှင့်ကြိုးစားပြီး၊ အိမ်လေးတစ်လုံးရအောင်ဆောက်ကာ၊ မိသားစုမျက်နှာမငယ်အောင်ထားခဲ့သည်။ အဖေ၀ယ်သည့်မြေကမြို့စွန်ပိုင်းမှာ လူတောင်သိပ်မစည်ခဲ့သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့တွေကသဘောမကျခဲ့။ အဖေကတော့သူသမ္မာအာဇီဝဖြင့်ရှာနိုင်သမျှကို သူ့အတွက်မသုံးဘဲ မိသားစုအတွက်စုခဲ့တာဖြစ်သည်။ အိမ်လေးဆောက်တော့၊ သားအဖနှစ်ယောက်၊ သဲဆန်ကာချ၊ မဆလာဖျော်-ကိုယ်တိုင်ဖောင်ဒေးရှင်းခင်းခဲ့ကြသည်။ အဖေ့နားမှာအမြဲကူတတ်သည့်ကျွန်တော်အဲဒီချိန်တွေတုန်းက တော်တော်လေးအပင်ပန်းခံနိုင်သည်။ မနက်ကနေ ညနေအဖေရုံးဆင်းချိန်ထိ သဲဆန်ကာချ၊ လွှဖြတ်စသည်ကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အဖေလာတော့ နှစ်ယောက်သားအုတ်စီကြပြီး၊ နံရံအချောကိုင်တော့မှ ပန်းရံဆရာငှားခိုင်းတော့သည်။ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ရန်ကုန်သွားခါနီးနေ့အထိ ပန်းရံနှင့်လက်သမားအလုပ်တွေကျွန်တော်လုပ်နေခဲ့သည်။ နောက်နှစ်ကျောင်းပိတ်တော့အိမ်လေးပြီးသွားပြီ။
အဖေနှင့်ငယ်တည်းက အတူနေနေရတော့ ကျွန်တော်သည်လည်းအဖေ့လိုဘဲ၊ ဘာမဆိုလုပ်တတ်ချင်၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်ဖြစ်လာသည်။ အဖေ့လိုဘဲဟင်းချက်ရင်အချိုမှုန့်သုံးတာမကြိုက်။ဆီများတာမကြိုက်။ အဖေနှင့်အမေနောက်ဈေးဝယ်လိုက်ဆွဲကူနေကျဖြစ်ခဲ့တော့၊ စစ်စစ်စီစီဈေးဝယ်တတ်လာသည်။ သားသမီးတွေအတွက်ချက်ပြုတ်ကျွေး၊ မုန့်လုပ်ကျွေးတာဝါသနာပါသည့်အဖေ့လို ကျွန်တော်လည်း အချက်အပြုတ်ဝါသနာပါလာသည်။ အ၀တ်အစားအသုံးအဆောင်ဝယ်တာထက်၊ နေစရာအတွက်ကိုအရင်ဦးစားပေးစုတတ်သည့်အဖေ့လိုဘဲ ဦးစားပေးမလိုဘူးထင်တာဝယ်ဖို့ ကျွန်တော်သည်လည်းနှမျောတတ်လာသည်။ အဖေက ကျန်းမာရေးအသိအမြင်လည်းရှိသည်။ မနက်ဆို စောစောထပြီး အဖေနှင့်အတူမောင်နှမအားလုံးတန်းစီပြီး ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရသည်။ မနက်တိုင်း။ ညဖက်မအိပ်ခင် ယောက်တိုင်းသွားတိုက်ပြီးပြီလားနေ့တိုင်းစစ်ဆေးတတ်သည်။ သွားမတိုက်ဘဲ အိပ်နေလျှင်ပွေ့ခေါ်ပြီး သွားတိုက်သည့်နေရာသို့ပို့ပေးကာတိုက်စေခဲ့သည်။ ဆုပေးဒဏ်ပေးစံနစ်ကိုသုံးပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကဆိုလျှင် ဆန်ရွေးလျှင် စပါးလုံးဘယ်နှစ်လုံးရရင် ဘယ်လောက်၊ ခဲဘယ်နှစ်လုံးတွေ့ရင်ဘယ်လောက်စသည်ဖြင့်သတ်မှတ်ပြီး ဆုပေးလေ့ရှိပြီး၊ အသီးသီးစုဘူးအတွင်းထည့်စုစေသည်။ နှစ်အတန်ကြာတော့မောင်နှမတွေစုထားသည့်ငွေတွေက အိမ်အတွက်အသုံးတည့်လာခဲ့သည်။ သားသမီးတို့
ဧ။်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကအစ၊ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်စောင့်ကြည့်ပူပန်တတ်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ဆိုမိသားစုတွေအားလုံးစုံစုံလင်လင်အတူပြလေ့ရှိသည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်သွားခွင့်မရှိ။ ဒါ၉တန်း၁၀တန်းအထိဖြစ်သည်။ သားသမီးတွေကိုစားချိန်တန်စား ကစားချိန်တန်ကစား၊ စာကျက်ချိန်တန်စာကျက် စံနစ်တကျစောင့်ကြည့်ပျိုးထောင်ပေးခဲ့သည့်အဖေ့လက်အောက်မှာလူလားမြောက်ခဲ့သည့် ကျွန်တော်သည်လည်း၊ သမီးကို၊ မိန်းမကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်၊ အမုန်းခံစည်းကမ်းထုတ်တတ်သည့် အိမ်ဦးနတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ (ချက်တင်တွေပါလိုက်ချက်တတ်လို့မိန်းမကကျွန်တော့်ကို သိပ်မကြည်ပါဘူး။ ဘယ်သူနဲ့မချက်နဲ့ဘယ်သူ့ကို block လုပ်ထား..လို့တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ အဲလောက်ထိတော့မချုပ်ချယ်ပါဘူး။) အဖေကအမေ့ကိုလည်းသိပ်ချစ်သည်။ ခေါ်သည်ကိုက ချစ်..တဲ့။ ဒါပေမယ့်အရမ်းတော့အလိုမလိုက်။ အမေကမိန်းမပီပီ အ၀တ်အစားလက်ဝတ်လက်စားဝယ်ချင်သည်။ အဖေက အိမ်ကအဓိက..တခါတလေပြဿနာတက်တတ်ကြသည်။ အဖေ့လိုဘဲ ကျွန်တော်သည်လည်းမိန်းမချစ်တတ်သည့်ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။ အဖေ့နဲ့စာလျှင်တော့ မိန်းမကိုအလိုလိုက်ပါသည်။ ရည်းစားဖြစ်စကတည်းက ဆို-က-ရေး-တီးဆုရငွေဖြင့် ရွှေနားကပ်လေးတရံစ၀ယ်ပေးခဲ့ဖူးသည်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးလည်းဘဲ့ မိန်းမနှင့်လိုက်မည်ထင်လျှင်ဝယ်ပေးချင်တတ်သဖြင့် ကိုယ့်ဘာသာ ချွန်းအုပ်နေရသည်။ အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်နေသဖြင့် စားဝတ်နေရေးဘက်ပေါင်းစုံတာဝန်ရှိနေသည်မဟုတ်လား။
အဖေကသားသမီးတွေနဲ့လည်းအတူဆော့ကစားပေးတတ်သည်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဆို အဖေကိုယ်တိုင်စွန်လုပ်ပေးသည်။ စွန်ဖြတ်ဖို့မှန်စာထောင်းပေး၊ မှန်စာတိုက်ပေးသည်။ ညဖက်ဆိုမိသားစုတွေမိုနိုပိုလီဆော့ကြ၊ ဘင်ဂိုဂိန်းဆော့ကြ၊ ခုထိအမှတ်ရစရာတွေဖြစ်သည်။ ဒီလိုအဖေနှင့်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည့်ကျွန်တော်သည်လည်း ကလေးတွေနှင့်ဆော့ကစားပေးရတာဝါသနာပါသည်။ သမီးနဲ့ဆော့ရလျှင်ပျော်သည်။ အဖေအမေနှင့်အတူကစားရသည့်သားသမီးဧ။် ခံစားချက်ဖီလင်ကိုနားလည်သည်။ မယ်ဒလင်လေးတီးပြီး၊ ခေတ်ဟောင်းတေးတွေဆိုပြတတ်သောအဖေသည်၊ မြန်မာ့ရိုးရာကိုလည်းထိန်းသိမ်းတတ်သူဖြစ်သည်။ စတီရီယိုကိုတော့သိပ်အားမပေးခဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ဂီတဆိုဘာမဆိုကြိုက်ပါသည်။ အဖေ့ဆီက အတီးအခတ်ပညာအမွေတော့မရခဲ့။
စေတနာညကျောင်းတွေမှာ အခမဲ့စာသင်ပြလာခဲ့သည့်အဖေ့လို ကျွန်တော်လည်းစာသင်တာဝါသနာပါလာခဲ့သည်။ မတတ်မချင်းသင်ပေးချင်စိတ်ရှိလာသည်။ တပည့်တွေစာမေးပွဲအောင်လျှင် ဂုဏ်ထူးထွက်လျှင်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တတ်လာသည်။
အဖေ့ကျေးဇူးတွေက ပြောမကုန်။ အော်...ကျွန်တော်အဖေနှင့်မတွေ့ရတာကြာသွားပြီ။ နောက်၅လဆိုအဖေနှင့်ပြန်တွေ့ရတော့မည်။ အဖေကျန်းမာပါစေ။
Posted by Dr. Nyan at 2:57 PM
I'm really miss my father due to your post. =) Thanks !!!
အကိုရေ ဖခင်မေတ္တာလေးတွေ ၀င်ခံစားသွားတယ်ဗျာ..
အကိုအဖေကျန်းမာပါစေ.. အမြန်ဆုံး မိသားစုတွေ ပြန်တွေ့နိုင်ပါစေ
စာဖတ်ပြီး ကျွန်တော်ကြောက်လာတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေမတွေ့ရတာ ၅ နှစ်ကျော်ဘီ။ တော်တော် အိုသွားဘီလားလို့။ အကို့အဖေ မတွေ့ရတာ ဘယ်နှစ်နှစ် ရှိပြီလဲ။ နှစ်ဘယ်လောက်တောင်ကြာလို့ ရုပ်ပြောင်းသွားတာလဲဗျာ။